Ukuxhumana Phakathi Kwezinto Zangaphandle Zokudlala Wezingane Nemvelo | I-GFUN
UKUTHENGWA KWAMANZI AMANZI
IBHODI LAMANZI AMANZI
IMIDLALO YOKUGQIBELA ESELULA
UKUDLULA IZIMPAWU ZOKUFUNDA
Amaphrojekthi Wendawo yokudlala
Amaphrojekthi wamapaki wamanzi
Ukuxhumana Phakathi Kwezinto Zangaphandle Zokudlala Wezingane Nemvelo
Izingane ezinjengesipho, kufanele zingabi ngamathoyizi, ukwakheka okujabulisayo kungaletha injabulo engapheli enganeni. Imishini yokudlala yezingane Ezinye izinto zokuhlobisa ubuhle nezixhobo zokudlala zezingane zingaba yingozi ezinganeni. Njalo ngonyaka, zingaphezulu kwe-100,000 izingane ezibandakanyeka ezingozini ezinkulu ngenxa yemishini yokudlala yezingane futhi kudingeka ziye esibhedlela ukuyolashwa.
Ngakho-ke, lapho ukhetha imishini yokudlala yezingane, kubalulekile ukuthi ungabheki imishini yokudlala kuphela, kodwa nemiyalo yokufaka. Izinto zokudlala zezingane zingavusa intshiseko yezingane zokufunda ukusebenzisana nemvelo. Imishini yokudlala yangaphandle yakhelwe ngokuya ngemvelo yangaphandle.
Isebenza ngempumelelo imvelo ngezindlela ezahlukahlukene, ibeka isisekelo sokuhlola okusebenzayo kwezingane, ukufunda okusebenzayo nokuxazulula izinkinga. Ukukhula kwengane kuhlobene kakhulu nemvelo yokuphila. Uma ingane inamahloni, awukwazi ukukhuluma kakhulu njalo. Kufanele umnakekele futhi usebenze isibindi sakhe ngenhloso. Ngalesi sikhathi, ungamthatha ayodlala nemishini yokudlala yezingane. Ngoba lo mdlalo uwumdlalo ophelele, hhayi nje ukuthuthukisa ukuvumelana kwezingane nekhono ezandleni, kepha futhi nokuvumela ubuqhawe bezingane, mazibe nesibindi sokubhekana nale nkinga yodwa. Ngincoma ngokucophelela amaslayidi wensimbi angenazingane izingane okufanele zidlale ngazo. Angasisiza ukuthi sinakekele izingane.
Futhi kungenze ngabona ukuthi lokhu kuyifanele kakhulu imidlalo yezingane, hhayi ukuqeqesha kuphela amandla omzimba, kepha futhi enhliziyweni yami iqinile. Ezinye izingane zizalwa zinesibindi, akufanele ucindezele amathalente akhe, kufanele uwaphathe kahle, futhi kufanele uthathe isandla sakho kahle. Lapho izingane ezinjalo zidlala, zithanda ukudlala amakhadi ngaphandle komqondo ojwayelekile. Isibonelo, bathanda ukubuyela emuva. khwela, njengoba kuyinselele ngokwengeziwe, kwanelisa ngokwengeziwe ukwazi kwakhe ilukuluku. Kulokhu, uma kungaqinisekiswa ukuthi kuphephile, bakhululekile ukudlala ngezinto zokudlala zezingane, ezingakhombisa ubuhlakani babo.
Isikhathi sokuthumela: Jun-30-2020
Ezokwakha 36, ​​Hongqiao Xinyuan,
Isifunda SaseChongchuan, Idolobha laseNantong
I-Ocean Rocking Horse Public
Ukuthi Ingane Yakho Ihlala Kangakanani Ixhomekeka O ...
Ukuxhumana Phakathi Kwezingane Zangaphandle̵ ...
Ilungiselela ukulungiselela izingane ...